Mihoatra ny arivo ny olona mitondra ny aretina covid -19. Mitombo hatrany koa ny olona namoy ny ainy noho io aretina io. Efa tsy mifadi-trovana intsony raha izany tranga izany no mbola sangisangiana amin’ny fanaovana tandrevaka ka tsy manaja arak’izay tokony ho izy an’ireo fepetra fiarovan-tena sady fiarovana ny mpiara-monina. Inona intsony moa no iresahana an’ny sasany miray monina na ny fiarovana ny tenany aza tsy vitany?
Misy moa ireo manakiana amin’ny filazana fa makarenin-tsofina ny fiventimbetsesana miverimberina ny zavatra efa voalaza. Tsotra ny momba izay. Efa miverimberina toy izao aza mbola maro ihany ireo manao tsirambina na efa miteraka sorisory eo amin’ny olona izay maro ihany koa ka efa tezitra mihitsy noho izay toe-tsaina mitera-doza ho an’ny rehetra. Ara-bakiteny mihitsy anie ilay hoe mihatra aman’aina ity sedra tsy mbola fahita ity. Tany am-piandohana dia voalaza fa ny zokiolona no tena mety tsy ahazaka an’ilay aretina sady mora mandray ilay virus. Araky ny tazana miandalana anefa dia izao hita izao fa tsy dia mifidy loatra ilay coronavirus na eo amin’ny olona ipetahany na eo amin’ny olona resiny hatramin’ny fahafatesan’izy ireo,. Ao ny tanora sy ny olona be taona, ao ny vavy ao ny lahy, na eo amin’ireo marary izany na amin’ireo olona namoy aina.
Ao koa ireo mpanararaotra, faly manakorontana. Manao fanentanana ny tompon’andraikitra, lazainy fa lasan-ko vavany fotsiny. Raha vao tsy miverimberina ny fanentanana ho voarain’ny olon-drehetra dia ireo ihany no maika ery manome tsiny amin’ny fiampangana ny fanjakana hoe tsy fahampian’ny fampitandremana ny mponina manoloana ny loza mitatao. Toy izany hatrany. Apetraka ny fihibohana lazaina fa tsy mitsinjo ny madinika mila mitady ny ho hanin-ko hanina anio. Sokafana kely ny sehatra, toy ny fanokafam-baravarana mampibosesika ny fiparitahan’ilay otrik’aretina hono.
Samy marina moa izany, fa adidin’ny fanjakana no mandanjalanja ny fampiarahana ireo fepetra mety mifanipaka na samy ilaina aza. Inona no azo atao ? Moa ve tsy izay olona nofidin’ny vahoaka hitantana ny raharaham-pirenena no manapaka? Ny hevitra samy manana ny azy, ary mora amin’ireo tsy tompom-pahefana no milaza fa diso ny fitantantana. Ny heviny anefa dia am-bava fotsiny fa tsy misedra ny fampiharana azy ka tsy afaka tsaraina ny tena fihatrany.
Tsy ao anatin’ny fahasahiranana no hiady hevitra sy hifandresy lahatra. Samy zanaka mpanefy ny mpanao pôlitika ka tsy misy manaiky ho resy amin’ny fifampiderana taim-by. Tsy izao anefa ny fotoana hifanaovana an’izany, mbola ho avy ny fifidianana.